Paartiin Badhaadhummaa Afaan Oromoo afaan hojiisaa taasisuun raggaasise - BBC News Afaan Oromoo
Paartiin Badhaadhummaa Afaan Oromoo afaan hojiisaa taasisuun raggaasise
Image copyright PM Office
Ministirri mummee Abiy Ahimad (PhD) ergaa fuula Feesbukii isaaniirratti dabarsaniin Afaan Oromoo dabalatee afaan Tigree, Afaar, Somaalee afaan hojjii federaalaa akka ta'an murtaa'uu ibsaniiru.
MM kana kan ibsan erga walgahii Paartii Badhaadhummaa haaraa hundeessuuf guyyoota sadan darbaniif gaggeessaa turan erga xumuraniin booda haala adeemsichaa ilaalchisuun ergaa har'a dabarsaniin ture.
Dhaabiin kunis gaaffiiwwan ummanni yeroo dheeraaf gaafataa ture haala deebiisuun kan hundaa'ee waan ta'eef, gaaffiin Oromoo ammas kan debii'eefi kan hafanis adeemsa keessaa deebii'aa kan deeman ta'u hubachuun dhaabbicha cimsuu irratti akka hojjataniif ummata Oromoofi ODP'f dhaamaniiru.
'Paartiin Badhaadhinaa pirezidantii malee dura taa'aa hin qabu'
'Osoo humna qabnuu humna kan nu dhabsiise ijaarama ADWUI'dha'
Haaluma kanaanis Afaan Oromoo afaan paartichaa ta'u qofa osoo hintaane, afaanoota biraa waliin afaan hojii federaalaa akka ta'uuf murtaa'uu himaniiru. Kunis gaaffiiwwan bara dheeraaf ummanni Oromoo kaasaa ture keessaa tokko ta'u yaadataniiru.
ADWUI Walitti baquu, wixinee seeraa haaraa fi sagantaa irratti marii taasisuufi murteewwan dabarsuu ibsaniiru.
Minstirri mummee Abiy ergaa dabarsan kanaan moggaasa paartii haaraa ilaalchisee, 'Paartii Badhaadhummaa' jedhamu ibsanii, ''badhaadhummaan qabeenyaa qofaan osoo hintaanee paartii ulfinaafi bilisummaan mirkannaa'u danda'u'' hundeessuuf murtessuu isaanii ibsaniiru.
Sirni federaalaa haala dogongorawwan hanga ammaatti qabaataa ture sirreessu isa dandeessisuun kan hundeeffamu akka ta'uuf waliigalu isaanii himuun, Afaan Amaaraatiin alattis afaan Oromoo, Tigiriffaa, Affaar fi Somaalee afaanoota hojii Federaalaa dabalataa akka ta'aniif murtaa'u ibsaniiru.
''Jaarmiyaaleen siyaasaa ADWUI jalatti ijaaramanii turan kan deebiisuu waan hindandeenyeef, dhaabbinni keenya haaraan kana sagalee guutuudhaan kan murteesse ta'usaa kabaja guddaan isiinii ibsu barbaada'' jedhaniiru.
Akkasumas gaaffii siyaasaafi dinagdee ummanni Oromoo bara dheeraaf kaasaa ture deebii akka dandeeenyuuf dhaabba kan cimseenee walii haa qabsoofnu jechuunis waamicha taasisaniiru.
Kana malees hirmaannaan siyaasaa akka kana duraa hudni qixxee kan itti hirmaatu osoo hintaane ''haala baayyina keenyaatiin dhaaba keenya keessattis ta'e, motummaa keessatti hirmaachuun dhugaa dimokiraasummaa baballisu gochuu akka danda'uuf sagalee guutuun waliin galleerras jedhaniiru MM Abiy.
"Paartiin Badhaadhummaa gama diinagdee qofaan osoo hin taane, kabajaan, bilisummaan akkasumas badhaadhummaa sab-daneessa Itoophiyaa keessatti dhugoomsuu akka danda'uuf, humnoonni faffaca'anii jiran walitti sassaabamuudhaan gurmuun dhaabbannee biyya Itoophiyaa geggeessuuf murteessuun keenya murtoo guddaa dha" jedhaniirus.
Dhaaba siyaasaa ADWUI bakka bu'e: 'Paartiin Badhaadhummaa pirezidantii malee dura taa'aa hin qabu'
Siyaasa Itoophiyaa: 'TPLF' rakkoo naannoo Amaaraa fi guutuu biyyaatti mudateef 'ADP' qeeqe
MM Abiy: 'Warreen ADWUI wuskii dhugdan lammiilee bishaan dhoobotan jiraachuu hindagatiinaa'
19 Onkololeessa 2019